March 11, 2019 qawdhan
Habeen aan sii fogeyn anoo markale gaadhiga wada oo ay idaacada BBC-du ii shidan tahay ayaan is weydiiyey: Horta idaacadan BBC-da een dhegaystaa maxay ii sheegtaa?
Kadib waan sii dhegaystay in muddo ah. War badan, wareysiyo, barnaamijyo ay dhegaystayaashu ka qayb gelayaan intuba way soo galeen waanay dhamaadeen. Ugu dambeyntii waxaan ogaaday waxay maantoo dhan ka waramayeen in uu ahaa wax aan waxba igu soo kordhin. Taasina waxay keentay su’aal kale oo ah: Maxay waxaas oo war ah iiga sheegayaan? Ma wakhtigay iga luminayaan?
Jawaabaha su’aalahaas hore umaan helin. Mar dambe ayaan fahmay in aanay wakhtina iga luminaynin balse ay ujeedo kale ka leeyihiin waxaas ay ii sheegayaan oo dhan.
Waxay uga dan leeyihiin waa in ay I hagaan. Ii sheegaan warka ay iyagu u arkaan in uu muhiim yahay. Ii sheegaan dhibaatooyinka dunida ka jira iyo dhinacyada is haysta kuwa khaldan iyo kuwa saxsan. Waxay uga dan leeyihiin in maadaama uu dadka Alle maskax siiyey in ay maskaxdaasi xogta ay helayso haday keenaan ay hadhow u dhaqaaqi doonto dhanka ay rabeen.
Hadana su’aal kale ayaan is weydiiyey oo ah xog iyo war noocee ah ayaan u baahanahay? Jawaabtu waxay noqotay xog iyo war sugan oo run ah balse aniga noloshayda ama nolosha dadkayga khuseeya. Waxa kaloo cadaatay in aan loo baahnayn warka maanta la gudbiyo ee kooban. Balse loo baahanyahay dhiraandhirin iyo faahfaahin dheeraada oo warka iyo xogtaba raacda.
Waxaynu ognahay in dadka badankoodu qofka war ama xog ay ka qaadanayaan ay iska eegaan. Qof aad ogtahay in uu beenaale yahay ood hore u aragtay isagoo is burinaya maalinta dambe ee uu war kale kuu sheego way kugu adkaanaysaa inaad qaadato warkiisa. Haday ugu yartahay waad hubinaysaa. Qof kale ood ogtahay in aanu dantaada wadin kana shaqaynaynin haduu isna war kuu sheego way kugu adkaanaysaa inaad ka qaadatid. Kawaran markaad qaar aydaan isku arrinba ahayn oo xaga diinta iyo afkaarta noloshana ku kala duwantihiin uu wax kuu sheego?
Dhanka kale, markaad tahay arday aqoon barta oo weli da’ yar, dunidu u cusub tahay, nin yar ama gabadh yar oo soo koreysa ah. Aqoonta aad baranayso falsafada ka dambeysa iyo yoolkaagu meeshuu yahay ama geedigaaga nolosha weli si fiican aanad u sugin, sideed u dooran kartaa aqoonta iyo tababarka aad qaadanayso? Buug aanad afka uu qoran yahay ku hadlin miyaad akhriyi kartaa?
Maanta waxa cad in jaamacadaheenu soo saaraan jaamiciyiin shaqo raadsada. Jaamiciyiin aan la iman Karin xalka dhibaatooyinka wadankeena haysta. Jaamiciyiin aan hindisi karin khidadii lagaga bixi lahaa dhibaatada go’doonka bulshadeena. Maxaa sababay in jaamicigeenu sidaas noqdo? Jawaab fudud baa odhanaysa aqoonta iyo tababarka uu ka helo jaamacadaheena iyo kuwa dibadaba ee la siiyo ayaa sabab u ah.
Hadaba waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka qoro sidii aynu uga bixi lahayn in aqoonta, warka iyo xogtaba cid aan danteena wadin ama danteena sidaynu u aragno inoola arkin ay ina siiso.
Previous Post 10 Ficil Ood Ku Garan Karto In Uu Ku Jecel Yahay.
Next Post Maxay Reer Galbeedku U Daneeyaan Dimuqraadiyada?
Xaas Raadiye Program 26
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 26
Duufaanada Siyaasadeed Ee Ku Xeeran Dalka. 13
10 Ficil Ood Ku Garan Karto In Uu Ku Jecel Yahay. 11
Sideed U Aragtaa Mustaqbalka Somaliland? 5
Hodan - Qaybtii 4aad 5
Hodan - Qaybaha Koobaad iyo Labaad 5
10 Ficil Ood Ku Garan Karto Inay Ku Jeceshahay 4
Hodan - Qaybtii Saddexaad 4